Akụkọ - Otu esi emeso ịkọwapụta ịta ahụhụ nke akpụkpọ ahụ osmosis
Usoro osmosis nke na-agagharị bụ akụkụ dị oke mkpa nke obere ihe eji eme ka mmiri dị ọcha, ma enwerekwa ihe egwu zoro ezo na sistemụ osmosis, ya bụ, ihu nke akpụkpọ ahụ osmosis dị mfe iji mepụta ịta ahụhụ site na solute ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ejidere, nke ga-emetụta nsị nke ngwaọrụ ọgwụgwọ mmiri.
1. asingbawanye ọsọ ọsọ
Nke mbụ, anyị nwere ike ịnabata usoro ndị a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ kemịkalụ iji bulie ọgba aghara ahụ. Nke ahụ bụ, gbalịa ịbawanye ọsọ ọsọ nke mmiri na-asọ site na akpụkpọ ahụ. Enwere ike ibelata oge adsorption nke solute site na mbenata oge obibi nke mmiri na ịba ụba ọsọ nke mmiri na obere akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa.
2. methodzọ nkwakọ ngwaahịa
Dịka ọmụmaatụ, a na-etinye mpaghara 29 ~ 100um n'ime mmiri mmiri na-emeso ya ma ha na-asọ site na sistemu osmosis na-agwakọta ọnụ iji belata ọkpụrụkpụ nke oke akpụkpọ ahụ mepere ọsọ ọsọ. Enwere ike iji iko ma ọ bụ methyl methacrylate mee ihe bọọlụ. Ke adianade do, maka tubular agbara osmosis usoro, Micro ogbo bọl nwekwara ike jupụta n'ime ndepụta mmiri mmiri. Otú ọ dị, maka efere na ụdị ụdị modulu modulu, usoro nke ịgbakwunye ihe nzacha anaghị adabara, tumadi n'ihi ihe ize ndụ nke igbochi ọwa ahụ.
3. Uzo esi eme ihe
A na-agbakwunye generator na usoro nke ngwa ngwa ọgwụgwọ mmiri. Njupụta na ugboro nke usu dị iche iche. Na mkpokọta, nke ka njupụta ma ọ bụ ugboro ole, etu a ka o si agba ọsọ ọsọ. A na-eji agitators mee ihe na ngwaọrụ nyocha niile. Ahụmahụ na-egosi na ọnụọgụ ntụgharị ọnụọgụ nwere mmekọrịta njikọ na ọnụ ọgụgụ nke ọgba aghara nke agitator.
4. Ntinye nke onye na-akwalite ọgba aghara
Ndị na-akwalite ọgba aghara bụ ihe mgbochi dịgasị iche iche nke nwere ike ime ka usoro ahụ na-asọ. Dịka ọmụmaatụ, maka akụrụngwa tubular, a na-etinye baffles gburugburu n'ime. Maka efere ma ọ bụ mpịakọta ụdị akpụkpọ ahụ modul, ntupu na ihe ndị ọzọ nwere ike ịdọrọ iji kwalite ọgba aghara. Mmetụta nke onye na-akwalite ọgba aghara dị ezigbo mma.
5. Add dispersive ọnụ ọgụgụ inhibitor
Iji gbochie azu osmosis akpụkpọ ahụ site na ịkpụcha na akụrụngwa ọgwụgwọ mmiri, a na-agbakwunye sulfuric acid ma ọ bụ hydrochloric acid iji dozie uru pH. Otú ọ dị, n'ihi nrụrụ na nchapu nke usoro acid, onye ọrụ ahụ nwere nsogbu, ya mere a na-agbakwunye ndị na-eme ihe nchịkwa dispersive n'ozuzu iji nọgide na-arụ ọrụ nkịtị nke usoro ọgwụgwọ mmiri.